Home » Vaovao momba ny famatsiam-bola fizahan-tany » Nihena 34.3% ny hetsika fanaovana raharaham-barotra sy fizahan-tany tamin'ny aprily 2021
Ny fihemorana amin'ny hetsika fifanarahana tamin'ny volana martsa dia nitondra fifaliana vitsivitsy, saingy tsy naharitra ela izany tamin'ny volana avrily nanodina ny fironana.
Ny sehatry ny fizahan-tany sy fizahan-tany dia mbola mikorontana noho ny fiantraikan'ny valanaretina COVID-19
Ny vola tsy miankina, ny famatsiam-bola ary ny fifanarahana M&A dia nihena 64.7%, 34.6% ary 26.2% nandritra ny volana aprily
Ny hetsika fifanarahana dia nihena tamin'ny tsena lehibe toa ny UK, Shina, India, Australia ary Etazonia
Fifampiraharahana 71 (ahitana mergers & acquisition (M&A), fananana manokana, ary famatsiam-bola) no nambara tamin'ny sehatry ny fizahan-tany sy fizahan-tany mandritra ny volana aprily, izay fihenan'ny 34.3% noho ny fifanarahana 108 nambara tamin'ny volana martsa.
Ny sehatry ny fizahan-tany sy fizahan-tany dia mbola mikorontana noho ny fiantraikan'ny valanaretina COVID-19. Na dia nitondra fihobiana aza ny fiakarana tao anatin'ny hetsika fifampiraharahana tamin'ny volana martsa, dia tsy azo notohizana ela izany tamin'ny famerenan'ny aprily ny fironana.
Ny fanambarana ny fananana manokana, ny famatsiam-bola, ary ny fifanarahana M&A dia nihena 64.7%, 34.6%, ary 26.2% nandritra ny volana aprily raha oharina tamin'ny volana teo aloha.
Ny hetsika fifanarahana dia nihena tamin'ny tsena lehibe toa ny UK, China, India, Australia, ary ny US raha oharina tamin'ny volana teo, raha toa ny firenena toa an'i Netherlands sy Korea atsimo nanatri-maso fanatsarana ny hetsika fifanarahana.